Sushen Pokhrel – Rising Junkiri
Member Sushen Pokhrel
Sushen Pokhrel wroteanew post, हामि नेपाली 1 year, 11 months ago
नेपाली हु म, नेपालको कसैको दासत्व होइन स्वतन्त्रता सधैको
रगतमा छ आगो शत्रु जलाउने ||
फेरी यै दुइ पाखुरीमा छ शक्ति बन्जर भूमिमा अन्न फलाउने
इतिहास हाम्रो हेर कत्रो विशाल […]
Sushen Pokhrel wroteanew post, हाम्रो प्रेम ! 1 year, 11 months ago
तिम्रो मेरो सानो संसार सपना ठुलो छ !!
हामी साथ भए सबै पुरा हुन्छ !!
तिम्रो साथ् छ र त् म पनि बलियो छु !!
मेरो लागि तिमि छौ !!
तिम्रो लागि म नै हु !!
आऊ मायाका गीत गाउ हामि संगै रमाऊ !!
माया मिठो साथै भ […]
Saanvi and Sushen Pokhrel are now friends2years ago
Moureen Max replied6months,2weeks ago
Sushen Pokhrel changed their profile picture2years ago
Sushen Pokhrel wroteanew post, हामि भित्रको हिरा !!2years ago
हामि भित्रको हिरा !
मनमा त्यो एउटा आगो ल्याऊ
असफलताको पोकोलाई तिमि जलाउ
तिमि भित्रै छिन् काली,चण्डी,लक्ष्मी र सरस्वति
सत्य र संघर्ष जहिले हुन्छन एक्लो बृहस्पति
Sushen Pokhrel wroteanew post, जिवन के हो ?2years ago
जिवन कसैले दुई चार दिनको सानो यात्राहो भने !!
त् कसैले जिवन धेरै लामो छ भनिदिए !!
जिवन के हो ? केहि होइन पनि कत्तिले भने !!
फेरी कसैले जिवन बडो महत्वपूर्ण छ पनि भने !!
फेरी कतै बाट आवाज आयो जिवन क […]